२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०५:४४
काठमडौं ,२७ कात्तिक । दुई देशका वीचमा सीमा विवाद चर्किएको एक वर्षपछि नेपाल–भारतवीच औपचारिक संवादको श्रृंखला शुरु भएको छ । भेटघाटहरु बाक्लिएका छन् । एकले अर्कालाई विश्वासमा लिने प्रक्रिया तीव्ररुपमा अघि बढेको छ ।
यदि कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भयो र ईपीजीको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न तयार देखियो भने त्यसपछि नेपालले के गर्ने ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्मको अडानमा यथावतै रहने कि कालापानीमै चित्त बुझाएर फेरि संविधानको अनुसूचीबाट नक्साको चुच्चो हटाउने ? यसमा नेपालको ठोस बटमलाइन आवश्यक छ । अनलाईनखबरबाट